कांग्रेस र कम्युनिष्ट फेल हुदैछन्-ओली, देउवा र प्रचण्डको परीक्षा सहज छैनः पत्रकार प्रतीक प्रधान
काठमाडौं । घम्साघम्सी र रस्साकस्सीबीच नेपालीको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीबारे सहमति भएको छ । चार दिनका लागि भनिएको महासमिति बैठकको छैठौं दिन बसेको पदाधिकारी बैठकले एक सय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री तारानाथ रानाभाटले काँग्रेसमा भएको गुटबन्दी र बिकृति बिरुद्ध खरो टिप्पणाी गरेका छन् । न्युज २४ टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति ६ प्रश्नमा कुराकानी गर्दै नेता रानाभाटले
कर्मचारी समायोजनमा कसको इन्ट्रेस्टमा आयो ? समायोजनले कर्मचारीलाई फाइदा कि घाटा ?
कर्मचारीले नेतालाई टेर्न छाडेका कारण पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी गएनन् भनियो । यसमा सत्यता पनि छ । जनताले करबाट तलब भक्ता खाने तर जनताको सेवामा जान्न भन्ने रवैया देखियो
काठमाडौं । चीनको सान्यामा जारी ‘मिस वल्र्ड’ प्रतियोगितामा श्रृंखला खतिवडाले दुई विधामा अवार्ड जितेकी छन् । गत सोमबार साँझ भएको घोषणामा श्रृंखलाले ‘मल्टिमिडिया अवार्ड’ र ‘व्युटी विथ पर्पज’ जितेकी हुन्
प्रमुख तीन वटा तथ्य जसले संघीयतामा धावा बोल्दैछ (भिडियो)
नेपाल जस्तो गरीब देशले अंगालेको संघीयतारुपी खर्चिलो व्यबस्थाले जनप्रतिनिधिलाई ठालु बन्ने मौका मात्रै दिएको छैन उनका आसेपासे भनाउदाहरुलाई मोजमस्ती गर्ने गतिलो अवसरनै जुर्‍यो । हिजो चुनावको चर्का नारा कानमा पर्दा
परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रश्नः चीनतिर प्रधानमन्त्री ओलीको बढी चासो किन ? (भिडियो)
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधारेको भनेपनि चीनप्रति बढी चासो देखिएको प्रष्टै देखिन्छ । बुढीगण्डकी जस्तो ठूला आयोजना चीनतिर दिन चासो देखाउनु अनि भारतले चासो राखेको फास्ट ट्रयाकलाई स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्छ
तिहारमा ढुक्क भएर बत्ती बाल्नुहोस्ः कुलमान घिसिङ (भिडियो)
काठमाडौं, २१ कात्तिक । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आजको लक्ष्मीपुजाको दिनका लागि आवश्यक सबै तयारी सकाएको बताएका छन् । देशभर कतै लाइट नकाटिने वातावरण बनाउन प्राधिकरणका कार्यकारी
कुकुरको महत्वसँगै मनोभावाना पनि बुझन जरुरी छः संस्थापक अध्यक्ष शाह (भिडियो)
काठमाडौं । तिहारको दोस्रो दिन आज घर–घरमा सुरक्षा गर्ने कुकुरलाई मीठा मीठा खानेकुरा खान दिएर मनाइँदैछ । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई मीठा मीठा परिकार खान दिए यमराजको ढोकामा द्वारपालका